Loka « Joseph Ramanankamonjy » : hisy ny fampianarana manao hosodoko | NewsMada
Kanto miaina ary hanana ny hoaviny ny hosodoko malagasy. Manaporofo izany ny hanatontosan’ny fikambanana Joseph Ramanankamonjy ny « Prix Joseph Ramanankamonjy » andiany faharoa, ny 18 hatramin’ny 24 janoary, etsy amin’ny Tahala Rarihasina etsy Analakely.
Mizara roa ity hetsika ity. Ny 18 hatramin’ny 22 janoary, hisy ny fampianarana manao sary hosodoko. Misokatra ho an’ny sokajin-taona rehetra izany. Tamin’ny andiany voalohany, ny oktobra 2014, maherin’ny 40 ny niatrika izany ka fito taona ny kely indrindra ary maherin’ny 50 taona ny lehibe indrindra. Kendrena ny mbola hahasarika olona hankafy sy hianatra hosodoko toy izany amin’ity manaraka ity. Marihina fa hiompana amin’ny fanaovana sarina tontolo na « paysage » sy sariolona na « portrait » ny fiofanana.
Aorian’ny fiofanana, ny 23 janoary, samy hampiranty ny zava-bitany ireo « mpianatra » ary hiroso amin’ny fijerena ny mendrika indrindra ny mpitsara (mpanakanto matihanina, olon-tsotra mpankafy hosodoko, mpikambana ao amin’ny fikambanana mpikarakara ny hetsika). Amin’io andro io ihany, hotolorana loka « Joseph Ramanankamonjy » ny sanganasa tsara indrindra. Hitohy hatramin’ny 24 ny fampirantiana ny zava-bitan’ny mpiofana, miampy ireo nataon’ny tamin’ny andiany voalohany.
« Tsy ny fifaninanana sy ny loka no zava-dehibe amin’ity hetsika ity fa ny famohazana ny fitiavana hosodoko ao amin’ny tsirairay. Eo koa ny fanomezana sehatra ireo te hahay hosodoko hilona lalindalina kokoa ao anatin’ity tontolo ity sy hampivelatra ny maha izy azy », hoy i Hemerson, mpanakanto mpanao hosodoko.
Ankoatra ny fampianarana, fampirantiana ary fanolorana loka, hisy hatrany ny fampahatsiahivana na fampahafantarana ny momba an’i Joseph Ramanankamonjy, iray amin’ireo andrarezin’ny hosodoko malagasy.